Nezvedu - Wuxi Bakeware Co, Ltd.
Isu tinogara tichitevedzera nheyo ye "mhando yekutanga" uye tinopa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Isu tine chinangwa chekuvaka nyanzvi, inoshamisa uye inohwina-kuhwina bhizinesi maitiro.
Yakatangwa munaKurume 2003, Wuxi yekubheka Appliance Factory ndeye inotungamira yekugadzira inoshanda mukutsvagisa, kusimudzira uye kugadzira mhando dzinodarika chiuru dzemahwendefa ekubikisa, mahwendefa echingwa, mahwendefa emapuranga, makeke emakeke, trolleys, zvindori zvemakeke, nezvimwe. vanenge mazana maviri evashandi. Isu tava anokosha grill anotengesa kuKFC, McDonald's, Burger King nemamwe akawanda makuru ekubikira akatenderera pasirese.
Isu tinogara tichiomerera pane iyo "Hutanho hwekutanga" musimboti, yekupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Isu tine chinangwa chekugadzira iyo inyanzvi, inofambira mberi uye kukunda-kuhwina bhizinesi maitiro.
Tine zvivakwa zvepamberi, zvigadzirwa zvekugadzira uye tinomhanyisa yedu yekudyara fekitori iyo inotenderwa neDupont (imwechete yeDIBS-Dupont Viwanda Bakeware System chitupa muAsia Maketi) Zvinonyanya kukosha pane zvese, tine yakanakisa R & D timu inova nechokwadi chekuti tinokwanisa kuvandudza zvigadzirwa zvitsva. gore rega rega uye kusangana nezvinodiwa zvakasiyana kubva kune vatengi vakasiyana pasi rese.
Inotungamira dhizaini yemhando dzakagadzirwa dzisina kugadzirwa muChina.
Imwechete yeDIBS-Dupont Viwanda Bakeware Sisitifiketi muAsia Maketi.